Watamu, Kilifi County, i-Kenya
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Karin
Ngenkathi uhlala e-Ecotower, empeleni uhlala ocezwini lobuciko oludalwe umdwebi wengilazi odumile uNani Croze. Indawo inemibalabala, ikhuthaza ngokwenama futhi ixhumene ngokuphelele nemvelo kanye nezakhi. Woza uhlale nathi uma ujabulele ukuzizwisa okuyingqayizivele, okunobuciko. Abasebenzi bethu bazokwenza uzizwe usekhaya futhi ulwandle luzokunikeza imisindo yangemuva emangalisayo nokubhukuda okuqabulayo! Ukuze uthole indawo yokuhlala eyengeziwe, ikotishi laseDoum Palm lingaphansi kwabaphathi abafanayo futhi endaweni efanayo.
I-Ecotower iyindlu yezihlahla ezungezwe isundu le-doum. Inezindonga ezimbalwa kuphela ezivumela umoya - kanye nemvelo - ukuthi ijikeleze ngokukhululeka ezitezi zayo ezi-4.
Ingilazi enemibala eminingi egaywe kabusha esetshenziswa esakhiweni sombhoshongo kanye nobuciko be-Nani's dalle de verre ezitebhisini naphansi idlala ngenjabulo nakho kokubili ilanga nokukhanya kwenyanga ukuletha ukukhanya okuyingqayizivele nokuma okujabulisayo ezindaweni zokuhlala.
Ngenkathi indawo ephansi inegalari yengilazi, uzobe uhlala ezindaweni ezintathu eziphezulu, ezizimele zombhoshongo.
ISITEZI SOKUQALA yigumbi lokuphumula elinendawo yokudlela etholakala esihlahleni esisehlathini elizungezile. Ibhulakufesi kanye nokudla kwakho kuzonikezwa lapha.
LESIBILI yindlu yokulala ene-en-suite enombhede olengayo kanye nethala elibheke phezulu kwezihlahla ngase-Indian Ocean. Ebusuku, lo mbhede ukhanyiswa inyanga edlulayo ingena phakathi kwamahlamvu esundu nezitebhisi ezivulekile.
Ngenkathi isitezi sesibili simayelana nokunethezeka nomoya opholile,
ISITEZI SESITHATHU siqukethe okokuzithokozisa okuyingqayizivele okunikezwa izwe: THE ECOTOWER STARBED.
Ukusuka endaweni ephakeme kakhulu ebheke e-Watamu ngeke nje ujabulele ukuphuma nokushona kwelanga okumangalisayo okuhlanganisa ukubukwa okungu-360 kwehlathi lase-Arabuco Sokoke kanye noLwandlekazi i-Indian Ocean kodwa uma izimo zezulu zizinhle uzokwazi futhi ukuphusha umbhede wakho wesibhakabhaka ubonakale uhlukile. ezungezwe imimoya ethambile yasogwini kanye nelanga lase-Afrika noma isibhakabhaka esikhanyayo kuphela.
Ngenkathi ubuka ilanga lishona phezu kwamahlathi asebekhulile futhi i-Indian Ocean ikhethekile ngokwanele, ukulala noma ukulala e-Ecotower Starbed KUPHUME KULOMHLABA!
Le ndawo ingaphansi kwabaphathi abasha kusukela ngoFebhuwari 2020 ukuze kuqinisekiswe ukuhlala okuqabulayo ngenkathi siku-Ecotower & Doum Palm House yethu.
UKUFINYELELA EBESHINI NENDAWO
Indlu ihlezi ehlathini lasogwini lwangempela ngokufinyelela okuqondile - endleleni yangasese engamamitha ayi-100 - eya olwandle kanye nolunye lwamabhishi angcono kakhulu futhi anabantu abambalwa e-Afrika. Sibekwe maqondana ne-WATAMU MARINE PARK equkethe izingadi ezinhle zamakhorali ezivikelwe ucwecwe (ngakho-ke abekho oshaka).
I-Ecotower nezindawo ezizungezile kuthule kakhulu, ingaphambili lolwandle nalo likude nokuphithizela kwamahhotela.
4.86 ·59 okushiwo abanye
Abasebenzi bami nabo bahlale betholakala ukwenza ukuhlala kwakho kube impumelelo. Singase futhi sihlele izinkonzo zabapheki ezithengekayo kodwa ezinhle uma ungathandi ukupheka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Watamu namaphethelo